Chii chinonzi SPAM? | ECommerce nhau
Ndiani asati anzwa nezve iyi pfungwa mune dijitari midhiya. Pamwe hapana mushandisi asipo kubva kubatanidza iri izwi. Nekuti zvirizvo, SPAM ipfungwa inofambidzana nemazwi ekuti junk mail, tsamba dzisina kukumbirwa uye mameseji asina basa uye ayo anoreva kune asina kukumbirwa, mameseji asingadiwe kana mameseji neasinga zivikanwe anotumira. Iri kirasi rekushambadzira mameseji anowanzo kutumirwa muhuwandu hwakawanda hunokuvadza iye anogamuchira mune imwe kana nzira dzakawanda.
Aya maemail anogona kukuvadza zvakanyanya kumakambani anosarudza iyi modhi yekuendesa. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti ivo vanozove neakapesana chishuwo kune chikamu chevashandisi uye vane njodzi zvakanyanya sezvo vachigona kanzura chero mushambadziro wekushambadzira kana kudzidzisa. Kana iwe uchida kuti zvese zvifambe zvakanaka, iwe unofanirwa kuisa zvese zviwanikwa kuitira kuti maemail ako asambova asina kuchena tsamba, tsamba dzisina kukumbirwa uye zvisina basa meseji. Hazvishamise kuti iwe unodzivirira inopfuura rimwe dambudziko kubva zvino zvichienda mberi.
Chimwe chezvinhu zvinokanganisa tsamba dzejunk mail, tsamba dzisina kukumbirwa uye spam ndiyo ine chekuita neyavo zvimwe zvakanangana nemhedzisiro. Mupfungwa yekuti vanogona kugadzira mamwe matambudziko kupfuura iwe zvaunofunga kubva pakutanga. Kunyanya kana ichi chikamu chakabatana nezviitiko zvebhizinesi kana online chitoro. Iko kwaunogona kushandura ako ehunyanzvi zvirongwa kuita chimwe chinhu. Kubudikidza nenhevedzano yemamiriro ezvinhu anogona kugadzirwa kubva munzira iyi mukushambadzira kwedigital.
1 Mhedzisiro yeSAMP pane zvido zvewekutengesa zvemagetsi
2 Zvinokonzerwa ne spam mune yako e-commerce
3 Ndeapi matambudziko anogona kuve nerudzi urwu emaimeri muchitoro chako chedigital?
4 Kunyatso kurapa nguva dzese
Mhedzisiro yeSAMP pane zvido zvewekutengesa zvemagetsi
Ehezve neakawanda uye akasiyana echimiro sezvauchazoona kubva zvino zvichienda mberi. Hazvishamisi kuti spam inoshandiswa paradzira shoko nekukurumidza uye kune vanhu vazhinji pasina chikonzero chekubvumidzwa kwavo kuti vagamuchire ruzivo rwunotapurirwa.
Mari yepamusoro yehupfumi
Iko kukanganisa kunokonzerwa ne spam kunogona kuverengerwa mune zvehupfumi mumaawa ebasa anopambadzwa zuva rega rega. Ichi chikamu chaunofanirwa kudzivirira pasi pechinhu chero chipi zvacho. Kwete chete yemari inogona kusimbiswa, asi nezvemaitiro mavanogona kukuona wakanyudzwa kubva panguva chaidzo idzi.
Kukuvadza kune inoshanda system
Kwete kungoonekwa kwemari chete kunofanirwa kukosheswa kubva pakuona spam kana spam. Kana zvisiri, pane kudaro, chokwadi chekuti iyi yakasarudzika bhizinesi maitiro angave aine hutachiona kana imwe yakaipa code inoitawo basa. Kusvika padanho rekukanganisa hutachiona hwako pakombuta yako wega. Nezvakakuvara zvaunogona kugadzira mumafaira, zvinyorwa kana runyorwa rwevatengi kana vashandisi. Kusvika pakuti inogona kukanganisa kuvandudzwa kwebhizinesi rako redhijitari pacharo.
Inonyengera ruzivo mota
Hapana mubvunzo kuti spam inogona zvakare kuve chishandiso chekushandisa, senge kutevedzera hunhu hwako, kuwana dhata remushandisi pachako kana kungoita kumwe kubiridzira. Iwe unofanirwa kuve wakangwarira kuti usazvione iwe mune imwewo nyaya yezvinhu izvi uye izvo pasina mubvunzo zvinogona kukuvadza zvido zvako zvehunyanzvi kubva panguva iyoyo chaiyo.
Limit chengetedzo inokwana
Imwe yemhedzisiro inokodzera yezviito izvi zvinoenderana nechinhu chakajairika sezvazviri kuti iwe unokwanisa kuzviona uchishayikwa munzvimbo yezvigadzirwa zvemagetsi. Nenzira isingadiwe uye iyo inogona zvakare kuzivisa dambudziko rinopfuura rimwe kubva zvino zvichienda mberi uye kuti unogona kupotsa muhukama hwako nevatengi vako kana vashandisi chero nguva. Usarase zviwanikwa nerudzi urwu rwebhizinesi nzira isingatungamira kunzvimbo yakanaka.
Zvinokonzerwa ne spam mune yako e-commerce
Nekudaro, iwe paunogamuchira spam (junk mail) pazasi peji pane chinongedzo chinogona kukupa iwe sarudzo yekusagashira iyo mhando yemeseji zvakare. Kana zvirizvo, zviri nyore kuziva makero emaemail aya. Naizvozvo, tinokukurudzira kuti uishandise kudzivirira mamiriro ezvinhu asingadiwe newe. Uye chii chakaipisisa, kuti vagone kukuvadza zvido zvako zvehunyanzvi, sezvinoitika mune izvi zviito zvatinokufumura pazasi.
Spam inomanikidza iwe kushandisa chaiyo chikamu chenguva yako kuyedza kuona aya spam kana kungoadzima. Kusvika pakuti inguva yenguva yaunotora kubva kune rako bhizinesi kana zviitiko zvehunyanzvi kuburikidza neInternet.
Kune rimwe divi, kuburitswa kwemaemail akasarudzika kunogona kuumba zvinopfuura dambudziko rimwe mu hukama nevatengi kana vashandisi. Nekuti inogona kuumba kukanganiswa pakati pavo uye neimwe nzira inokuvadza hukama hwebhizinesi.
Izvo hazvifanirwe kupa iyo mufananidzo wakakomba kwazvo nezve kambani yemadhijitari yatinomiririra. Kana zvisiri izvo zvinopesana, tinogona kupa chiratidzo chepamusoro pamusoro pesangano redu. Ehezve, iro basa ratakaita kwemakore mazhinji zvakadaro harina kukodzera kuisa njodzi.
Hapana mubvunzo kuti vanogona zvakanyanya kukanganisa mameseji kana ruzivo rwatinotumira kune vatengi kana vashandisi. Kusvika padanho rekuti ivo vanokwanisa kuregeredza nzira idzo isu takagadzira kuchengetedza kubatana kwakakodzera pakati pezvikamu zvese zveichi chiitiko.
Inogona kupedzisira yasvika padanho rekutengeswa kwezvigadzirwa zvedu, masevhisi kana zvinhu zvinokanganiswa. Nenzira isina basa zvachose uye inogona kudzivirirwa nenzira inoshanda kubva pakutanga.
Iko kufarira kumakambani anotumira spam kana junk mail kwakanyanya kuderera kune chikamu chevashandisi vese. Inogona kusvika padanho ratisingafarire chero mhando yezvinhu zvachose uye chinhu ichi chine mhedzisiro yakaipa pane yekutengesa kana sitoro yedhijitari.
Izvi ndezvimwe zvezvinoreva izvo spam zvinogona kuve nazvo pane rako bhizinesi redhijitari. Sezvaungave iwe waona, kune akawanda mamiriro pane ayo ekutanga akafanoona mune ako akawandisa mazano.
Ndeapi matambudziko anogona kuve nerudzi urwu emaimeri muchitoro chako chedigital?
Kunyangwe spam ichinetsa vanhu, zvakanyanya kunyanya kana iwe uri mutoro webhizimusi reInternet. Mupfungwa iyi, iwe unofanirwa kuona izvo zviitiko zvinogona kuoneka neanonzi mameseji eSAMP. Sezvo mune zviito zvatiri kuzokufumura pazasi:
Iko hakuna kupokana kuti aya maemail anogona kuve iwo mviro wezvinetso zvako. Nekuti iwe unogona kushandisa yakawandisa nguva uchiiverenga kana uchikahadzika nezve ayo angangoita mamiriro kana mavambo uye kuti iwe unogona kuzvipira kune zvimwe zviitiko mukati meako nyanzvi chiitiko.
Kunyangwe iwe usina kufunga nezve chinhu ichi, hachisi chokwadi chechokwadi kuti spam inogona kukuvadza zvido zvako zvehunyanzvi kana iwe ukapa ruzivo rwakadai kana kuita mirawo yerudzi urwu e-mail yekunyepedzera. Kusvika padanho rekuti pakupedzisira vanogona kuve dhonza mukuvandudza bhizinesi rako. Mupfungwa iyi, iwe unofanirwa kuita nekuchenjerera kukuru kana imwe yeaya akakosha meseji ikaonekwa.
Kunyangwe iwe uchichida kana kwete, izvi zvinoreva kubhadhara kukuru pamabhiri ako epamba. Nekuda kwemutengo weInternet kubatanidza, kushandiswa kwetekinoroji nyowani zvigadzirwa kana kungoita nekuda kwekunyanyisa kwayo kuvimba kunogona kutanga muhupenyu hwako hwepachivande. Muchidimbu, haufanire kurerutsa ino chikamu che spam kana junk.
Gamuchira zvisina kukodzera zvemukati wechitoro chako chepamhepo
Kana kuti iwe haukwanise kukanganwa ichi chinhu chinogona kana chingasakwanise kupinza kupinda kwako kwehunyanzvi chiitiko mukati mevatengi kana vashandisi vako Kusvika padanho rekuti mushandisi anogona kunge achigamuchira mameseji ane zvisina kukodzera kana zvinogumbura zvemukati. Izvi hazvigone kuuya kubva pachikamu chako nekuti chinhu chete chaungave uchiita kukanganisa basa rako rehunyanzvi kubva panguva dzino chaidzo.
Kunyatso kurapa nguva dzese
Ehezve, haufanire kutsaurira spam sekunge wanga uri mutambo. Kana zvisiri, pane kudaro, iwe unofanirwa kuedza nepese paunogona kuti uzviparadze. Usakanganwa kuti uri pamberi pebhizinesi rako pachako pamambure uye izvi zvinoda akateedzana ezvibvumirano zvausingakwanise kuregeredza. Hazvishamisi kuti chero kukundikana mune izvi kunogona kukudyira kutadza kwehunyanzvi. Izvi zviri nyore, uye kana ukasazvinzwisisa pakupedzisira uchaona zvese zvakaipa zvinoitwa nemitambo iyi.
Nepo kune rimwe divi, chakanakisa pane zvese ndechekuti iwe une zvisingaverengeke mabikirwo kuitira kuti zvinhu zvisazonyanya kushata. Ichi chinofanirwa kuve chimwe chezvinangwa zvako zvikuru shure kwezvose. Usazeze kana chero nguva nekuti unenge uine chekuita nezvingaitika kubva zvino zvichienda mberi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Chii chinonzi SPAM?
Renard roux akadaro
Ndakaiwana iri nyaya inonakidza. Spam inokanganisa vese vashandisi veInternet nemabhizimusi epamhepo, uye ekupedzisira anofanirwa kungwarira kuti kushambadzira kwavo kweemail hakushanduke kuita spam. Ini ndinofunga hazvisi chete zvinoenderana nehuwandu hwekushambadzira maemail avanotumira asi pane izvo zvirimo uye nekunyora, dzimwe nguva ndezve zvakashata zvemhando yepamusoro izvo zvinoita kuti mumwe mubvunzo kuve kwakakomba kwebhizinesi. Ini ndinofunga iwe unogara uchifanira kuita chiitiko chekuona maitiro atinozviona isu sebhizinesi kubva kunze uye nemabatiro anoita vatengi isu. Ndakafarira chinyorwa 🙂 kwaziso
Pindura Renard Roux